NetBeans 12.2 waxay la timid taageero qaababka cusub ee Java, PHP iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
NetBeans 12.2 waxay la timid taageero qaababka cusub ee Java, PHP iyo wixii intaa ka badan
NetBeans 12.2 horey ayaa loo sii daayay iyo qaabkan cusub, Hay'adda Apache Foundation waxay ku dhawaaqday in NetBeans 12.2 inta badan waxay bixisaa taageerada qaababka cusub ee gaarka u ah JDK 14, JDK 15, iyo PHP 8.
Kuwa aan aqoon u lahayn NetBeans, waa inaad ogaataa taas waa IDE (jawiga horumarinta isku dhafan) Java, ujeeddadiisa ugu weyni waa dardargelinta dhismaha barnaamijyada Java, oo ay ku jiraan adeegyada webka iyo codsiyada aaladaha moobaylka.
Marka lagu daro howlaha caadiga ah ee aaladda, sidoo kale waa suurtagal in lagu kordhiyo taageerada luqadaha barnaamijyada C iyo C ++, taageerida abuurista codsiyada dhismaha SOA, isticmaalka XML iyo XML schemas, BPEL iyo Java Web Adeegyada ama qaabaynta UML. Kordhinta NetBeans Profiler waxay kuu ogolaaneysaa inaad la socoto isticmaalka CPU iyo isticmaalka xusuusta ee codsi la siiyay.
Dhinaca kale, NetBeans Mobility Pack waxay kudarineysaa hage deegaanka NetBeans oo kuu ogolaanaya inaad la socoto fulinta barnaamijyada mobilada.
NetBeans waxay ku qoran tahay Java, taas oo ka dhigaysa mid aad u jilicsan waxaana lagu ordi karaa nidaamyada kala duwan ee nidaamka (Windows, Linux).
1 Ku saabsan NetBeans 12.2
2 Sidee loo rakibaa NetBeans-ka Linux?
Ku saabsan NetBeans 12.2
Nooca cusub ee NetBeans 12.2 ayaa yimid waxyar kadib laba bilood markii la sii daayay nooca 12.1. IYONoocaan cusub wuxuu ku darayaa dhowr astaamo oo cusub ilaa isha furan ee IDE waxayna ka dhigtaa waxoogaa casriyeyn maktabadaha kala duwan.
Tan waxaa ka mid ah taageerada qaababka Java ee u gaarka ah JDK 14 iyo 15, ku darista Tifatiraha Java iyo khalad-bixiye Java ah oo ku jira Visual Studio Code (VS Code), astaamo cusub oo loogu talagalay JavaFX iyo Java Web, iyo inbadan.
Sidoo kale, taageerada nooca PHP 8 ayaa lagu darayTan, isticmaaleyaasha NetBeans hadda waxay leeyihiin astaamo badan oo cusub oo ay wataan, oo ay ku jiraan noocyada ku biirista, hawlwadeenka Nullsafe, iyo nooca soo noqoshada joogtada ah. Taageerada loo yaqaan 'Oracle Jet', oo in badan soo daahday, hadda si wanaagsan ayaa looga saaray.
Waxaa sidoo kale la sheegay in abuurista fasalo cusub, isdhexgal iyo enum la siiyay iyadoo la dhajinayo qoraalka boodhka.
Dhinaca qalabka horumarinta webka Java, waxaa lagu xusay taas Taageerada qaab-dhismeedka Guga 5.2.9 MVC waa la hagaajiyay. Isweydaarsiga ku saabsan tafatirka astaamaha mashruuca websaydhka, keydinta URL-yada ee xiriirrada qaraabada ah ayaa la hagaajiyay. Isdhexgalka Derby-ga ayaa laga saaray modullada Payara Server.
Koodhka taageerada JavaFX waa la kordhiyay si uu u taageero walxaha aan is bedbeddeli karin.
Taageero lagu daray shaqooyinka cusub ee PHP 8.
Isku xiraha javac wuxuu ku egyahay hal tusaale.
Taageerada gabowday ee Oracle JET waa laga saaray.
Taageerada CSS3 ee la hagaajiyay.
Noocyada la cusbooneysiiyay Ant 1.10.8, exec-maven-plugin 3.0.0, Gradle Tooling API 6.7, JDBC PostgreSQL 42.2.16, payara-micro-maven-plugin 1.3.0, Framework Framework 4.3.29, TestNG 6.14.3.
Ogaanshaha JDKs lagu rakibay SDKMan iyo Debian ayaa la bixiyay.
Qashin-qaadista shaqsiyeed iyo fulinteeda ayaa karti leh markii mashruuca Gradle uu bixiyo hawsha ku habboon.
Sidee loo rakibaa NetBeans-ka Linux?
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay ku rakibaan NetBeans qeybintooda Linux, waxay ku sameyn karaan iyagoo raacaya tilmaamaha aan hoos ku wadaagno.
Mid ka mid ah siyaabaha loogu rakibo IDE-kan 'Linux' waa adigoo soo dejiya rakibayaasha oo shaqeynaya. Shuruudda keliya ayaa ah in Java la rakibo.
Hadda waxaan si fudud u helnaa rakibayaasha ka soo xiriir khadkan hoose.
Markaad wax walba rakibto markaa, firi faylka cusub ee aad soo dejisay galka aad jeceshahay.
Iyo barta laga soo galo waxaan geli doonnaa tusahan ka dibna fulinaynaa:
Si loo dhiso Apache NetBeans IDE. Markaad dhisto waxaad ku shaqeyn kartaa IDE adoo garaacaya
Qaab kale oo rakibid ah ayaa lagu caawiyaa xirmooyinka Flatpak, markaa waa inaan helnaa oo keliya taageerada lagu rakibo xirmada noocan ah nidaamkayaga.
Rakibaadda waxaa laga samayn karaa terminal iyadoo la qorayo amarrada soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » NetBeans 12.2 waxay la timid taageero qaababka cusub ee Java, PHP iyo wixii intaa ka badan
Atheris, Qalabka Qalabka Tijaabada Tijaabada Python